Semalt Islamabad Expert: Fa maninona no mampiasa tranonkala tranonkala sy tranonkala?
Ny dingan'ny fitiliana amin'ny tranokala dia azo faritana amin'ny fampiasana ny tranonkalan'ny mpitsikilo fikarohana fikarohana.
Inona àry ny mpikirakira tranonkala? Michael Brown, mpitantana ny Succession Successor Semalt , dia manazava fa ny mpitsikilon'ny tranonkala dia programa fanodikana ampiasain'ireo fitaovam-pikarohana mba hivezivezy amin'ny Internet sy metodista. Ny mpitsikilo amin'ny tranonkala dia ampiasain'ireo fitaovam-pikarohana mba hampifangaroana ny vokatra ambony rehetra amin'ny fikarohana. Izy io dia manome ny safidin'ny sary, sary, lahatsary, feo, vaovao, pejy mavo ary pejy fotsy. Ireo mpikirakira ny tranonkala dia antsoina koa hoe spider web na robot motera.
Ny anjara asan'ny tranokala
Mitifitra toerana iray manan-danja amin'ny milina fikarohana ny web crawler. Manana andraikitra samihafa izy io mba hahazoana antoka fa ny milina fikarohana dia miasa amim-pahombiazana. Ny milina fikarohana rehetra dia mitaky ny fampiasana spider web ho an'ny antony maro. Ny anjara asan'ny web crawlers dia ahitana
Manomeza angona. Ny tranonkalan'ny tranonkala sy ny fitaovam-pitadiavana dia mampiasa mpiserasera amin'ny web mba hanome azy ireo ny angon-drakitra farany avy amin'ny tranonkala hafa. Ny mpiloka web dia afaka mametraka ny fampahalalana rehetra amin'ny fikarohana.
Mamorona ny pejin'ny pejy rehetra notsidihina. Andraikitra manan-danja amin'ny web crawlers izany. , noho izany, afaka mahita ny fikarohana farany sy ny fampahalalana rehetra omena amin'ny alàlan'ny tranonkala. Ny tranonkala nakarin'ireo mpitsikilo amin'ny tranonkala dia ampiasain'ireo fitaovam-pitadiavana ihany koa mba hanatsarana haingana fikarohana.
Manamboara endriky ny endriky fikarohana. Mpikirakira tranonkala amin'ny ankapobeny dia mitifitra manerana ny tranonkala ary mamaky ny fampahalalam-baovao rehetra sy ny antsipiriany hafa. Avy eo dia mampiasa an'io tahirin-kevitra io izy avy amin'ny endriky fikarohana.
Manangana sy mamerina indexes. Rehefa avy nandalo ny habaka rehetra sy ny tranonkalany ry zareo, dia niverina indray ny tranokala. Raha vantany vao tafaverina any an-trano izy, dia hampiasa ny fitaovam-pikarohana ireo valim-panadihadiana mba handinihana sy hananganana endriky fikarohana. Ny ankamaroan'ireo fitaovana toy ny Yahoo sy Google dia mampiasa spider web ho an'ity tanjona ity.
Mamolavola tetikasam-pikarakarana amin'ny tranokala hanamarinana ny code HTML, manangona ny karazana fampahalalana rehetra avy amin'ny tranonkala samihafa ary hanamarina rohy, tranonkala mampiasa tranonkala. Ny fahaizan'izy ireo manangona ireo fampahalalana rehetra ireo dia zava-dehibe ho an'ny fikojakojana tranonkala iray. Raha tranonkala iray no mampiasa tranonkala iray, dia havaozina ao amin'ny tranokalan'ny tranonkala na ny motera fikarohana ny fampahalalana ny tranonkala manangona. Ny fikarohana rehetra mifandraika ihany koa dia havaozina izay midika fa ny tranonkala dia miseho hatrany hatrany amin'ny antsipiriany rehetra momba ny tranonkala.
Ny fampidiran-tserasera mpikirakira ny tranokala dia mamaritra ny angon-drakitra hita ao amin'ny tranonkala. Ny môtô sy ny vohikala fikarohana rehetra dia miankina amin'ny mpikirakira ny tranonkalany mba hanangona ny fampahalalam-baovao rehetra ary hitazona azy ireo vaovao. Ny tombontsoany dia voafaritra tsara amin'ny alalan'ny fanangonana ny tranonkalany. Ny zavatra aseho mandritra ny fikarohana dia voafaritra ihany koa ny angona nalain'ireo crawlers amin'ny tranokala. Ny mpikirakira tranonkala dia miantoka fa rehefa manomboka ny fikarohana, ny milina fikarohana dia hanome ny mombamomba ny singa rehetra mifandray amin'ny teny fanalahidy manan-danja amin'ny fikarohana Source .